ခရီးသညျယူလာတဲ့ ပါဝါဘဏျပေါကျကှဲလို့ အရေးပျေါ ဆငျးသကျခဲ့ရတဲ့ လယောဉျ
ခရီးသညျယူလာတဲ့ ပါဝါဘဏျပေါကျကှဲလို့ အရေးပျေါ ဆငျးသကျခဲ့ရတဲ့ လယောဉျ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ကနေ ဟောင်ကောင်ကို ဦးတည်ပျံသန်းတဲ့ လေယာဉ်တစ်စီးဟာ ခရီးသည်တစ်ဦး ယူဆောင်လာတဲ့ ပါဝါဘဏ် ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဒီဇင်ဘာ (၂၅)ရက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မလေးရှားနိုင်ငံသားတစ်ဦး သယ်ဆောင်လာတဲ့ Brand မဟုတ်တဲ့ […]
အိုင်ဒေါဆုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ နောက်ကြောင်းအမှန်ကို ပိပိရိရိ ဖုံးဖိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အက်စတာ ပရိသတ်ကြီးရေ၊ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ ပြီးသွားခဲ့ပေမယ့် မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ပြဿနာတွေဆေက်လက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ အက်စတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်မှာ အက်စတာ့ရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေကိုဖွင့်ချနေတာပါ ။ အိုင်ဒေါ ကို ငွေလေးတစ်သောင်းတည်းနဲ့ လာပြီးပြိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ […]
၂၀၂၀ကို ယူမသွားသင့်တဲ့ အရာ (၈)ခု…
၂၀၂၀ကို ယူမသွားသင့်တဲ့ အရာ (၈)ခု… (1) ကျိုးပဲ့နေတဲ့ ဆက်ဆံရေး ဆက်သွယ်မိတဲ့ အခါတိုင်း သင့်စိတ်ကို တွေဝေစေတဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ လက်ရှိ သင်နေထိုင်နေတဲ့ ဘဝပုံစံကို လမ်းချော်သွားစေမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ အားလုံးကို နောက်မှာ ထားခဲ့ပါ။ အချစ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်တွေမှာ ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိရင် လုံးဝထားခဲ့လိုက်ပါ ။ […]
ပဲပြုတ် ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
ပဲပြုတ် ၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ ပဲပြုတ်စားခြင်း၏_အကျိုးကျေးဇူးများနှင့််​ သတိပြု ဆင်​ခြင်​ရမည့်​ အချက်​များ ဆေးသိပ္ပံနည်းအရ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်ရာ စားတော်ပဲပြုတ်ထဲတွင် လူသားတို့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ် တို့ အလုံအလောက် ပါရှိပြီး၊ ဘေးဖြစ်စေတတ် သော ကိုလက်စထရောလုံးဝမပါရှိသည့် အတွက် နေ့စဉ် စားသုံးပေးသင့်သော အာဟာရဖြစ်ကြောင်း […]
သငျသတိတခကျြ မပွုမိပါက အန်တရာယျပေးနိုငျသော ကားအောကျပိုငျး လက်ခဏာမြား
သငျသတိတခကျြ မပွုမိပါက အန်တရာယျပေးနိုငျသော ကားအောကျပိုငျး လက်ခဏာမြား ကားရဲ.အကြီးမားဆုံးပြဿနာရယ်လို့ ဆိုလိုက်ရင် တော်တော်များများ က အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ပြေးမြင် တတ်ကြပါတယ်၊ တကယ်တော့ အင်ဂျင်ရောဂါပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကဖြေရှင်းရခက်ခဲပြီးငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပေမယ့်၊ သင့်ကားနဲ့ သင်ရဲ့ အသက် အန္တရာယ်အထိ အကြီးမားဆုံး ဒုက္ခပေးနိုင် တာကတော့ […]
လမေဖွတျဖို့ကာကှယျဆေး နှငျ့ ဒူးနာ၊ခါးနာ သမားမြားအတှကျ
လမေဖွတျဖို့ကာကှယျဆေး နှငျ့ ဒူးနာ၊ခါးနာ သမားမြားအတှကျ ခါးနာ ဒူးနာ သူမြားအတှကျ မခကျပါ ဘဲဥကိုပှကျနသေော ရနှေေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနဈခနျ့ပွုတျလိုကျပွီး ဆယျယူလိုကျပါ ။ ဆယျယူလိုကျသညျ့ ဘဲဥကို ပနျးကနျလုံးထဲ့ကို ဖောကျထညျ့လိုကျပါ ။ စားကောငျးစရေနျ သကွားအနညျးငယျ သငျ စားကောငျးစလေောကျ သညျ့ အနအေထားသို့ထညျ့ပွီး […]
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင် ပျော့အောင် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း….
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင် ပျော့အောင် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း…. ဆံပင် တစ်ခါမှ မဖြောင့်ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆံပင်က ဖြောင့်ထားတဲ့ သူတွေလို ပျော့တယ် ဆံသား ပြောင်တယ် စင်းတယ် ။ ဘာမှ မလုပ်မှတော့ ဘယ်ပျက်ဆီးမလဲ လို့တော့ မထင်နဲ့ ဆံပင် […]
ဆီးမထွက် တာတွေ ဓမ္မတာ လွန်တာတွေ အတွက် ၁၅ မိနစ်လောက် အတွင်း ကောင်းတဲ့ဆေးနည်း လာပါပြီ
ဆီးမထွက် တာတွေ ဓမ္မတာ လွန်တာတွေ အတွက် ၁၅ မိနစ်လောက် အတွင်း ကောင်းတဲ့ဆေးနည်း လာပါပြီ “ အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ ” ကျန်းမာခြင်း သည် လာဘ်ကြီး တစ်ပါး..တဲ့ အာရောဂျံ = ကျန်းမာခြင်းသည် ၊ ပရမံ = […]
ဆုမ်ဆုမ် Winner ဖြစ်ပြီး ဗုတ်ပေးပြီး ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ သူတစါယာက်
ဆုမ်ဆုမ် Winner ဖြစ်ပြီး ဗုတ်ပေးပြီး ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ သူတစါယာက် ဆုမ်ဆုမ် Winner ဖြစ်ပြီးနဲ့မဖြစ်ခင် မင်းကတော့သိနိုင်မယ်မထင် ” ဆိုသည့် စာသား ပါဝင်သည့်ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ခေတ်စားနေ မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲ ပြီးသည့် နောက်ရက် ( ယနေ့ ) […]
၂ဝ၂ဝ-ပွညျ့ ခုနှဈ ဗုဒ်ဓဟူသားသမီမြားအတှကျ တဈနှဈစာဟောစာတမျး
၂ဝ၂ဝ-ပွညျ့ ခုနှဈ ဗုဒ်ဓဟူသားသမီမြားအတှကျ တဈနှဈစာဟောစာတမျး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးဖွားသူများက ဤနှစ် သူတစ်ပါးကိုအားကိုး၍မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်သူများတကာထက်ပို၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သော စွမ်းအားရှင်များဖြစ်နိုင်သလို့ အရာရာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှအဆင်ပြေလာမည်။မိမိအတွက်အကျိူးဖြစ်ထွန်းသည့်အခွင်အလမ်း၊အလုပ်အကိုင်များပါရရှိမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများယခုနှစ်တွင်ရှေ့ပိုင်း(၆)လတွင်နေရာသစ်၊ဝန်းကျင်သစ်များသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ စီးပွားအရှိန်အဟုန်နှင့် တက်ကာ အိမ်ပိုင်၊ကားပိုင်ဖြစ်သွားတက်၏။ မထင်မှတ်ထားသောခရီးများ၊မရည်ရွယ်သောခရီးများ သွားရတတ်၏။ လူမျိုးခြားကူညီခြင်းနိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သတ်သော ကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်းများကြုံရမည်ဖြစ်၏။ လူမျို […]